३० अर्बका १० ठूला उद्योगमा चीनको मात्र २७ अर्ब लगानी, कुन उद्योगमा कति छ ? - खबर खुराक- हरेक खबरमा विषेश खुराक
३० अर्बका १० ठूला उद्योगमा चीनको मात्र २७ अर्ब लगानी, कुन उद्योगमा कति छ ?
in अर्थ/बाणिज्य, अर्थतन्त्र
काठमाडौँ, ७ बैशाख ।
चालु आर्थिक वर्षको (२०७४/७५) नौ महिनामा ३० अर्ब ४१ करोड ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको १० ठूला उद्योग दर्ता भए । दर्ता भएका १० ठूला उद्योगमा चीनको लगानीमात्र २७ अर्ब ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको उद्योग विभागको तथ्यांकमा छ । चीनले यो लगानी विभिन्न ६ वटा उद्योगमा गरेको हो ।
उसले जलविद्युत, होटल, सिल्क रोड, हर्बल लगायत कम्पनीमा लगानी गरेको हो ।
देशमा स्थिर सरकार बनेसँगै विदेशी लगानीकर्ताहरु धमाधम उद्योग दर्ता गराउन आउनेक्रम बढ्न थालेको छ । चिनियाँ लगानीकर्ताहरुको लगानी गर्ने गन्तव्यमा नेपाल पनि प्राथमिकतामा पर्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
साउनदेखि चैत २३ गतेसम्म दर्ता भएका २२६ उद्योगमा १० वटा ठूला उद्योगको रुपमा दर्ता भएका हुन् । भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका (युएसए) र जापानको पनि लगानी रहेको छ ।
स्रोत : उद्योग विभाग
९ महिनामा ३५ अर्ब विदेशी लगानीको उद्योग दर्ता
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म ३५ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । देशमा तीनै तहको चुनाव भइसकेको र सरकार समेत बनिसकेकाले विदेशी लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको उद्योग विभागका सुचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भुसालले जानकरी दिए ।
चैतमा मात्रै ३२ वटा उद्योग दर्ता भएको उनले भने । यी ३२ उद्योगमा ठूला उद्योग भने परेका छैनन । आठौ महिनासम्ममा (फागुन) १० वटा ठुला उद्योग दर्ता भएको विभागको हो ।
१० करोड रुपैयाँ भन्दा सानो लगानीका उद्योगलाई साना उद्योग, १० करोड देखि २५ करोड रुपैयाँ सम्मका उद्योगलाई मझौला र २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको उद्योगलाई ठुला उद्योग मानेर विभागले दर्ता गराउँदै आएको छ । यी उद्योगमा झण्डै ८ हजार जनाले रोगजगार पाएको भनिएको छ ।
तर, रोचक कुरा के छ भने सरकार हरेक महिना उद्योग दर्ताको लिस्ट निकाल्छ तर ती दर्ता भएका उद्योग कुन कुन सञ्चालनमा आए र तीनहरुमार्फत रोजगार कतिजनाले पाए भन्ने रेकर्ड राख्ने संयन्त्र सरकारसँग छैन ।
यता सुचना अधिकारी भुसाल भने त्यसको पनि रेकर्ड राख्ने गरी विभागले तयारी थालेको बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार करः अब खोला तर्दा पनि तिर्नुपर्ने
नेपालमा डलरको मूल्य कसरी भयो अहिलेसम्मकै उच्च?
विराटनगर महानगर अन्ततः कर बढाउने निर्णयबाट पछि हट्यो
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा अर्ब नाघ्ने : चुहावट २० प्रतिशत
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत – किसानलाई रु ६३ लाख अनुदान